Computer ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ Software တွေရဲ့ Product Key တွေကိုပြန်ရှာဖို့ Product Key Explorer 4.1.2.0 Full Version - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Computer software Product Key Finder Computer ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ Software တွေရဲ့ Product Key တွေကိုပြန်ရှာဖို့ Product Key Explorer 4.1.2.0 Full Version
Computer ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ Software တွေရဲ့ Product Key တွေကိုပြန်ရှာဖို့ Product Key Explorer 4.1.2.0 Full Version
Maung Pauk at 10:03:00 PM Computer software, Product Key Finder,
Product Key Explorer 4.1.2.0 Full Version
Product Key Explorer ဟာ ကွန်ပျူတာထဲမှာ Install လုပ်ထားတဲ့ Software တွေရဲ့ Procuct Key တွေကို ပြန်ရှာဖွေသိမ်းဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်.. ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲမှာသာမက ကိုယ်နဲ့ Network ချိတ်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေထဲက Software တွေရဲ့ Product Key တွေကိုပါ ရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်..
Software ပေါင်း ၈၀၀၀ ကျော်ရဲ့ Product Key တွေကိုပြန်လည်ရှာဖွေ သိမ်းဆည်းနိုင်တာမို့ လိုအပ်ရင် ယူလို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
၁. Setup နဲ့ Install လုပ်ပါ..
(၁. Setup နဲ့ Install လုပျပါ..)
၂. Crack Folder ထဲက ProductKeyExplorer.exe ကို Copy ကူးထားပါ..
(၂. Crack Folder ထဲက ProductKeyExplorer.exe ကို Copy ကူးထားပါ..)
၃. Desktop ပေါ်က Product Key Explorer icon ကို ညာကလစ်ထောက်ပြီး Open File Location ကိုနှိပ်ပါ.. ခုနက Copy ကူးထားတဲ့ ProductKeyExplorer.exe ကို Paste လုပ်ပါ..
Overwrite လုပ်မှာလား မေးရင် သဘောတူလိုက်ပါ..
(၃. Desktop ပျေါက Product Key Explorer icon ကို ညာကလဈထောကျပွီး Open File Location ကိုနှိပျပါ.. ခုနက Copy ကူးထားတဲ့ ProductKeyExplorer.exe ကို Paste လုပျပါ..
Overwrite လုပျမှာလား မေးရငျ သဘောတူလိုကျပါ..)
၄. ကီးရှာဖို့ကတော့ Software ကို Run ပြီး Select Computer to scan ကိုနှီပ်ပါ.. ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲမှာ ရှာချင်ရင် Local ကိုရွေး၊ Network ထဲက ကွန်ပျူတာတွေကိုရှာချင်ရင်တော့ IP တွေကိုရိုက်ထည့်ပြီး OK ကိုနှိပ်ပါ.. ပြီးရင် Find Product Keys ကိုနှိပ်ပြီးရှာနိုင်ပါပြီ.. ရလာတဲ့ ကီးဖိုင်တွေကိုသိမ်းချင်ရင်တော့ File ထဲက Save ကိုနှိပ်ပြီး သိမ်းနိုင်ပါပြီ..
(၄. ကီးရှာဖို့ကတော့ Software ကို Run ပွီး Select Computer to scan ကိုနှီပျပါ.. ကိုယျ့ကှနျပြူတာထဲမှာ ရှာခငျြရငျ Local ကိုရှေး၊ Network ထဲက ကှနျပြူတာတှကေိုရှာခငျြရငျတော့ IP တှကေိုရိုကျထညျ့ပွီး OK ကိုနှိပျပါ.. ပွီးရငျ Find Product Keys ကိုနှိပျပွီးရှာနိုငျပါပွီ.. ရလာတဲ့ ကီးဖိုငျတှကေိုသိမျးခငျြရငျတော့ File ထဲက Save ကိုနှိပျပွီး သိမျးနိုငျပါပွီ..)
Product Key Explorer 4.1 : by using this software application you’ll be able to track all software licenses installed on your local or remote network computers. You can save product keys in many formats such as Txt File, Excel Workbook, Access Database, HTML Page, XML Data, and more. it givesaquick and easy solution for backing up all the licenses installed on your computer withasingle click. it fully supports thousands of programs from several leading vendors or software developers.
Simple, intuitive, and very easy-to-use it Supports txt, Excel, Access, XML, HTML. it Supports thousands of popular software Save as digital format or print directly Recoveralost or forgotten product keys Automatically recovers all installed keys it Recovers and backups lost product keys Scan and recover product keys instantly it Supports local and remote network computers, etc
Home Page : http://www.nsauditor.com/product_key_finder.html
Download Product Key Explorer 4.1.2.0.zip: 6.38 MB
Computer software, Product Key Finder
Computer software Product Key Finder